I-Eventbrite: Imicimbi Yenziwe Kalula Ngempela | Martech Zone
ULwesithathu, April 9, 2008 NgeSonto, Septhemba 30, 2012 Douglas Karr
I-Eventbrite yasungulwa ekuqaleni kuka-2006 futhi amavolumu anyanga zonke amathikithi asatshalaliswa asevele ezigidini ezinamashumi ezinkulungwane zabasebenzisi. Ngibone owami wokuqala I-Eventbrite isimemo esivela kumcimbi okhuthazwe ngu- UDkt Thomas Ho futhi ngiyisebenzisele imicimbi emi-3.
Noma ihlanzekile, isikhombimsebenzisi siyinkimbinkimbi kancane. Kukhona i-TON yezici ezipakishwe kulolu hlelo lokusebenza futhi lokho, ngokungangabazeki, inselelo yokuthola amamenyu afanele ezindaweni ezifanele. Uma konke ufisa ukukwenza ukwengeza umcimbi osheshayo futhi umeme abantu abambalwa, kukhona i-nice plain-4-step wizard.
Uma ufuna ukwenza izinketho ezithuthuke kakhulu (izinhlolovo, abaphendula ngokuzenzakalela, amakhodi wesaphulelo), kufanele useshe kancane. Ngilutholile lonke usizo ebengiludinga kumafayela abo osizo futhi, ngaphezu kwalokho, bane- Ithani lama-Tutorials awusizo!
Uma uzibuza ukuthi kungani ungeke ukwenze lokhu ngokwakho, kunezizathu ezimbalwa:
I-IMO, inzuzo enkulu kakhulu ye-Eventbrite ukuthi ushicilela umcimbi wakho ngokuzenzakalela Okwenzekile evdb (Database Lemicimbi kanye Nezindawo). Lokhu kukhuthaza umcimbi wakho ukudlula imingcele yabafundi bakho futhi uwenze ufinyeleleke kwamanye amasayithi, njenge Okuzayo kwe-Yahoo.
Okulandelayo uhlelo lokukhokha nokuqina kwamathikithi, lokhu kuyikhanda ongafuni ukubhekana nalo wedwa! I-Eventbrite inendlela yokubuyiselwa imali!
Kukhona ithani lezinye izinto ezinhle - uhlu lwezivakashi olushicilelwe, ukuphakelwa kwe-RSS kumicimbi yakho, Facebook ukuhlanganiswa, ukuhlanganiswa kwe-Paypal, ukuhlanganiswa kwe-Google Checkout, i-API enamandla, indlela yokumane ishicilele ikhasi lakho lomcimbi, uhlelo lobulungu… uyiqambe igama! Futhi, ungagcina amathebhu ekuthuthukisweni kwawo ngokusebenzisa i- I-Eventbrite blog.
Buka umhlane wakho, Eventbrite!
Okubekwe eceleni, noma kunjalo! Ngifanele ngilinganise ezinye izinhlelo zokusebenza ze-imeyili Service Provider ngasikhathi sinye futhi TicketMaster yayisengxenyeni. Yize bengelona ibhizinisi elithandwa kakhulu embonini yamathikithi, iTicketMaster iyindawo futhi inolaka olukhulu.
Anginaso isiqiniseko sokuthi iTicketMaster, ngokuxinana kwayo embonini kanye nezimali ezimba eqolo, izokuma kude kangakanani ivumele ukuqalisa okuhle okufana ne-Eventbrite kuqhubeke nokukhula ngempumelelo! Bangase bangakwazi ukubamba, noma kunjalo, uma i-Eventbrite iqhubeka nokwenza okusha!
Tags: ukuphathwa kwemicimbiipulatifomu yomcimbiIsixazululo somcimbi
UChaCha's Shift to Mobile wayekhazimulisa
Ngo-Apr 10, i-2008 ku-9: 06 AM
Bengilokhu ngibuyekeza lokhu ngeklayenti muva nje futhi ngiyakuthanda engikubonayo. Ishaya ukudala okuthile ngokwezifiso.
Ngo-Apr 10, i-2008 ku-9: 18 AM
Ngizokukhombisa amakhasi ashumekiwe, anezitayela lapho ngakhe khona ukwakheka ngokwezifiso, u-Ian, kepha iklayenti lahlangana nabo ngakho angizukuthatha isikweletu. 😉